Zvinhu Zvaunofanira Kuziva Nezve Kraft Pepa Chikafu Bowls |Haishu
Zvinhu Zvaunofanira Kuziva Nezve Kraft Pepa Chikafu Bowls
Kraft mapepa mbiya zvishoma nezvishoma ari kutsiva echinyakare kurongedza mumakore achangopfuura.Kunyangwe "kunonoka kuberekwa" asi nekuda kweakawanda maficha uye kushamwaridzana kwezvakatipoteredza, inovimbwa uye inosarudzwa nevashandisi.Hezvino izvo zvaunoda kuziva nezve Kraft Paper Bowls.
Zvishandiso zvekugadziraKraft Paper Bowls
Zvinhu zvekugadzira Kraft mapepa ndiro, sezvinoreva zita rayo, inogadzirwa kubva kuKraft bepa.Kraft bepa rinochinjika, rakashata, rakaoma kubvarura, rakaoma kubvarura, ... rinoshandiswa zvakanyanya kugadzira chigadzirwa kurongedza.Mifananidzo yakajairika inogona kutaurwa ndeyeKraft Paper Mabhokisi, Kraft Paper Bags, Kraft Paper Straws… Saka zvinoKraft Paper Bowls.
Kraft bepa haringori shava chete asi rinogona kuve chena, nyanga dzenzou, yero-brown, nezvimwe, kuitira kuti vatengi vave nesarudzo dzakawanda dzekusarudza kubva.
Inoshandiswa kugadzira mabhodhoro emapepa ane dhizaini yakasimba, muromo wembiya unoputirwa kuita murwi wakasimba kugadzira chimiro uye kubatsira mbiya kuti isakanganiswa panguva yekufambisa.Uye zvakare, iyo dhizaini inobatsirawo chivharo kuti chikwane zvakanyanya padyo nemuromo wembiya, kuve nechokwadi chekuti chikafu nemvura hazvibviswe.
Zvakanakira zveKraft Paper Bowls
Kuchinja zvishoma nezvishoma kwevatengi kubva kupurasitiki, mapurasitiki, uye styrofoam kurongedza kuenda kupepa zvakare nekuda kweakawanda mabhenefiti eKraft Paper Bowls:
Models:Kraft mapepa mbiya ane akawanda magadzirirwo senge epurasitiki kurongedza.Nemagadzirirwo mazhinji akasiyana, hukuru hwakasiyana, vashandisi vane sarudzo dzakawanda zvichienderana nezvavanoda.
Yakachengeteka kune hutano:Mapepa mbiya anogona kubata zvese zvinopisa uye zvinotonhora zvekudya.Chigadzirwa chacho hachibudisi chepfu nekuda kwekupisa chiito.Vatengi havafanirwe kunetseka nezve kushandisa mbiya dzemapepa pakutora.Kunyanya, ndiro yepepa haina kunyanya kukanganiswa nekupisa kwezuva panguva yekufamba, saka hazvizokanganisa kunaka kwezvokudya.Zvokudya zvinogara kwenguva refu mumabhokisi emapepa kupfuura mune zvimwe zvinhu.
Eco friendly:Chinhu chinonyanya kukosha chinotungamira pakusarudzwa kwevatengi ndiko kuderera kwembiya dzemapepa.Chero bedzi chigadzirwa chacho chine hushamwari hwezvakatipoteredza, chichagamuchira rubatsiro rwenhamba huru yevashandisi.Nekudaro, kuratidza shanduko yakanaka mukuziva kwevashandisi nezviito zvenharaunda.
Mapepa mbiya anoita yemhando yepamusoro bhokisi rekudya
Mapepa emidziyo ane chimiro chakareruka uye dhizaini, asi kukwidziridza kukosha kwechikafu mukati.Zvigadzirwa zvakanaka uye zveumbozha, zvichigadzira mifananidzo inobata maziso uye inokwezva vashandisi.Kunze kwechikafu chinonaka, mifananidzo inobatawo zvakananga maitiro evatengi.Vatengi vanosarudza chikafu chekudya zvinoenderana nekuravira kwavo asi havazokanganwa kufuratira mifananidzo inoyevedza.
Kraft Paper Bowls inokodzera zvese zvemunhu uye zvebhizinesi kushandiswa.Kana iwe uine chido chekuchengeta chikafu chekutora, haugone kufuratira iyi sarudzo ine hutano uye ine hushamwari.
Judin Packing inyanzvi inyanzvi mukugadzira zvigadzirwa zvemapepa:mbiya dzepepa,mapepa mabhokisi, mashanga emapepa,mapepa emabhegi,mapepa trays, etc. Zvigadzirwa zvose zvinogadzirwa kubva papepa remhandara, zvakachengeteka kune utano uye zvakaedzwa.nezvemhando.Judin Packing iri kushandiswa nemaresitorendi makuru kuzvitoro zvidiki nemhuri.Zvigadzirwa zvinogoverwa munyika yose, mamwe mapurovhinzi ane vanogovera kuti vaunze zvigadzirwa zvakachengeteka kune vashandisi.
Zvigadzirwa zvaJudin Packing, kwete chete mbiya dzemapepa dzinoraswa dzine zvivharo, zviri kuvimbwa nevashandisi.Zvigadzirwa zvinowanikwa muhukuru hwakasiyana, magadzirirwo uye mavara ari nyore kune vatengi.Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, mutengo unonzwisisika uchienzaniswa nezvimwe zvigadzirwa pamusika.
Nguva yekutumira: Mar-09-2022